AKWỤKWỌ Iwu | Ọrụ Asụsụ America
Ntụgharị asụsụ nke iwu
Ntụgharị asụsụ Ngwaọrụ Ahụike
Ụlọ ọrụ & Tech. Ntughari
Ntụgharị asụsụ agụmakwụkwọ
Ntụgharị asụsụ nke mmadụ
Ntughari & ntụgharị ntụgharị
Ntụgharị asụsụ na-abaghị uru
Ntụgharị asụsụ nyocha ahịa
Ntụgharị asụsụ nkwukọrịta
Ntụgharị asụsụ nke nrụpụta
Ntụgharị mgbasa ozi
Ntụgharị asụsụ nkuzi
Nkwurịta okwu nke ogbako
Asụsụ Amụma Amerịka
Ịsụgharị onye ọbịa na njem nlegharị anya
Ịsụgharị mgbazinye akụrụngwa
Ịsụgharị Nchọpụta Ahịa
Ịsụgharị na saịtị
Nsụgharị ntụgharị vidiyo (VRI) - Njikọ mebere
Kedu ihe bụ transcription?
ONYE ANYỊ NA -Arụ ọrụ
IKE NKWUKWU ANYỊ
Ebumnuche 4 ịhọrọ AML-Global maka ntụgharị akwụkwọ iwu gị
Ụfọdụ ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ
Nsụgharị Iwu nke Iwu
Ihe ndekọ gọọmentị
Nsụgharị ụlọ ọrụ
Nsụgharị nyocha ahịa
ỌR .R PRODU EGO
Kemgbe 1985, Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) na-enye ọrụ ntụgharị maka ụlọ ọrụ iwu. Ka ụwa na -adịwanyewanye iche, ọchịchọ maka ọrụ ndị a na -aga n'ihu na -eto.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka iwu nke AML-Global na-enwe ike idepụta ọrụ ọ bụla na oke ọsọ na izi ezi. Ma ọ bụ okwu ọnụ ma ọ bụ chịkọta ya, ị nwere ike ịtụkwasị obi na ọrụ anyị ga -akarị ihe ị tụrụ anya ya.
Ka anyị bido site n'ịkọwa transcription. Ntugharị bụ usoro ịtụgharị ọdịyo na vidiyo ka ọ bụrụ ederede ederede. Ọ bụrụ na nke a gụnyere ihe karịrị otu asụsụ, mgbe ahụ enwere ike iwepụta mkpụrụedemede n'asụsụ abụọ ahụ. Site na teknụzụ dị elu nke oge a, ọrụ ndegharị aghọọla nke ọma karịa yana iche iche. Enwere ike ịnye nsonaazụ ikpeazụ n'ụdị dịgasị iche iche nke ụdị anụ ahụ na nke dijitalụ.
Ụdị ederede abụọ ahụ
Verbatim: Nke a bụ ụdị transcript a na -ahụkarị. Ọdịiche a chọrọ ka onye na -edegharị akwụkwọ gbanwee ihe sitere na ụda gaa na ederede, okwu n'otu okwu, na -enweghị nchịkọta ọ bụla.
Nchịkọta: Ụdị a na -enye ohere ka onye na -edegharị ihe na -ebipụ ozi na -enweghị isi na ụda. A na-ejikarị nke a eme ihe mgbe onye na-azụ ahịa nọ n'oge mgbụsị akwụkwọ.
AML-Global ejirila ọtụtụ ụlọ ọrụ iwu rụọ ọrụ, gụnyere:
Ngalaba Nchebe (DOD)
Ụlọ ọrụ gọọmenti etiti
Ngalaba ọrụ mmadụ
n'ala nna Nche
Ngalaba ụlọ ọrụ iwu kwadoro n'ime ụlọ
Firlọ ọrụ iwu
Ụlọikpe Obodo na nke Federal
Ngalaba ndị agha
Ịga n'ihu na teknụzụ tinyere ihe ndị ọzọ a na -ebubata n'ọkwá dị mkpa. Nke a bụ ụfọdụ ụdị anyị na -ejikwa.
Ndị ọkachamara ederede anyị
Ndị na-edegharị akwụkwọ nwere nkà na-enwekarị ahụmịhe nke idegharị iwu ihe karịrị afọ ise ma jide ọtụtụ nzere iwu. Site na ndị na -edegharị akwụkwọ nwere nka na teknụzụ dị elu, anyị nwere ike mezue ọrụ gị ngwa ngwa. Anyị na-eji teknụzụ teknụzụ dị iche iche dị iche iche iji hụ na transcript ngwa ngwa, ziri ezi. AML-Global anọwo na-arụ ọrụ na ngalaba iwu ihe karịrị afọ iri atọ.
Pịa ebe a ịhụ ndepụta ndị ahịa anyị
Anyị na -anọ ebe a maka gị. Kpọtụrụ anyị site na email na Translation@alsglobal.net ma ọ bụ kpọọ anyị na 1-800-951-5020 maka ọnụego ngwa ngwa.
COVID-19 (CORONVIRUS) MGBE & Ngwọta asụsụ ka ị ga-eji ugbu a!